Washington: Kulan looga Hadlayo ka Hortagga Burcad badeedda
Mas’uuliyiin ka socota arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ka hadlay siyaabaha looga hortagi karo burcad-badeedda Somalia.
Shir lagu qabtey xarunta warbaahinta qaranka ee ku taala magaalada Washington ayaa looga hadley dhibaatooyinka ka taagan arrimaha burcad badeedda Somalia.
Shirkan wxaa ka hadlay isla markaasina ka jawaabay su’aalaha warbaahinta Thomas Countryman, ku-xigeenka koobaad ee kaaliyaha xoghayaha xaafiiska arrimaha siyasadda iyo militaryga , Ambassador Donald Yamamato oo ah ku-xigeenka koowaad ee kaaliyaha xoghayaha wasaaradda arrimaha dibedda u qaabilsan arrimaha Africa.
Waxaanay labada sarkaal ka hadleen ahmiyadda ay leedahay in gobolka laga kaalmeeyo sidii ay maxkamadahooda u hormarin lahayeen illa iyo heer ay gaaraan in ay si buuxda caddaalada u horkeenaan dambiilayaasha burcad badeeda oo ay maxkamadeeyaan.
Mr Thomas Countryman , ayaa tusaale u soo qaatay dalka Kenya ,oo uu sheegay in ay muujisey dhaqdhaqaaq fiican balse sida uu sheegay weli horumarka la rabo lagama gaarin geeska Africa.
Sidoo kale waxaa saraakiishaasi la weydiiyey sida looga hortagi karo madaxfurashada oo ah arrinta ku dhiirigalisa buracd-badeedda, Mr Countryman oo su’aashaas ka jawaabey ayaa sheegey in tallaabada ugu muhiimsan ee dhankaasi laga qaadi karo in ay tahay horumar dhaqaale oo dalka guduhiisa laga abuuro taasna waxaase uu raaciyay in marka hore loo baahanyahay in nabad iyo xasilooni la helo.
Ambassador Donald Yamamato oo ah ku-xigeenka koobaad ee kaaliyaha xoghayaha wasaaradda arrimaha dibedda u qaabilsan arrimaha Africa, ayaa carabka ku dhfutey dadaalka dadka somaliyeed ay sameynayaan sidii ay kaalin uga ciyaari lahaayeen nabadeynta iyo xasilinta dalkooda. Wuxuu si gaar ah ugu hambalyeeyey saxaafadda maxalliga oo xaalado adag ka dhex shaqeynaya iyo kuwa caalamiga oo Somalia ku wajahan .